> Resource > Windows > Hel Best Xilisoft Video Converter Ultimate Alternative for Windows
Isticmaalka Xilisoft Video Converter Ultimate ku siinayaa, habka la isku hallayn karo si fudud si loogu badalo aad videos si loogu isticmaalo qalabka kala duwan. Waxaad awoodi doontaa inay qabsadaan hab ah in aad videos eegi iyo sidoo kale waxa ay qaab in ay tahay in ay doorashada mahad heli karo iyo tafatir ah. Dabcan, waxaa muhiim ah in la fahmo in uu jiro la heli karaa xal kale. Haddii aad haatan doonaya duwan Xilisoft Video Converter Ultimate for Windows, waxaad leedahay ikhtiyaar aad heli karto in si weyn loo kalsoon tahay oo loo isticmaalo noocyada kala duwan ee dadka sababta oo ah xog iyo natiijada.
The Xilisoft Video Converter Ultimate duwan oo loogu talagalay Windows noqon lahaa Wondershare Video Converter Ultimate ( version Mac la heli karo). Waxay samayn karaan diinta iyo tafatirka oo aad ka filan oo ay la socdaan soo degsado iyo gubasho, oo aad ku helayso si buuxda gacanta aad videos.
Waa maxay Tani Xilisoft Video Converter Alternative for Windows Alternative fiican
Sida loo rogo ama la Alternative si ay Xilisoft Video Converter Ultimate for Windows
1. 30X Speed ​​Conversion si dhakhso ah
Diinta aad videos waa mid cajiib ah la Wondershare. Waxaa si degdeg ah waa, wax badan oo ka dhaqso, si aad u heli kartaa in diinta si deg deg ah. Ma aha in aad si fadhiisataa oo sug in la bilaabo socday taas aawadeed. Tani waa horumar weyn ka gaareen converters kale oo qaadan lahaa saacado dheeraad ah ee shaqada la mid ah. Waxa ay ku caddaato in Wondershare fog yahay dhakhso badan oo dhan ee converters oo weyn oo kale, sida AHV video Converter, Cyber ​​link video Converter. Waxaad ka eegi kartaa shaashadda hoose.
2. Taageer Qaabka Media kasta
Marka aad diinta, waxaa jira ku dhawaad ​​ma dhaafi karin sida in waxa aad samayn karto. Waxaad badalo karaa kale si Xilisoft Video Beddelaan for Windows in qaab kasta oo sare quality.There jira qaabab badan oo la heli karo, oo ay ku jiraan video caadi ah, video 3D iyo HD video. Waxaad awoodi doontaa in aad doorato qaabka ugu wanaagsan ee ku habboon baahidaada iyo diinta ka bilaabi isla markiiba. Fantastic, miyaanay ahayn?
3. sameecadda Conversion
Waxa arrintan Xilisoft ka fiican kale Video Converter Ultimate for Windows tahay awooddiisa ah inuu xaalkaa videos, download videos iyo gubi videos ay u DVD la AAN tayada khasaaro.
Ka hor inta diinta video ah, oo aad jar karo, qabsato, ku dar watermark, ku dar saamayn aad video. Iyada oo ay taasi, aad qabsato karaa baahidaada shakhsi ahaaneed si loo arki karo dadka si fudud. Tusaale ahaan, si ay u jar video ah, fadlan riix badhanka Edit ku saabsan video ah laga keeno, ka dibna dooran icon walba suuqa kala video tafatirka si ay u shakhsiyeeyo.
Iyadoo hawsha, software this kuu ogolaanaysaa inaad ku darto arrimo DVD il-qabad badan, kuwaas oo loo dhisay in codsiga. Just guji tab gubatay on sare ee software-ka, dooran foom oo aad jeceshahay adigoo gujinaya "Change Template" on xaq ah interface ka, ka dibna riix badhanka Beddelaan si ay u bilaabaan si ay u gubaan.
Goobaha la isticmaalo sida YouTube, waxaad ka qaadan kartaa videos ka guud ahaan internetka iyo iyaga on your computer. Tani waxay ku siinaysaa fursad ay ku daawadaan oo dhan ee aad ugu jeceshahay helay videos si sahlan oo aan haysan si ay u dhacaan aad taariikhda aad. Haddii aad jeclaan lahayd inaad saaray video ah oo u gal DVD ah, ee aad awoodo. Waa sahlan oo ka shaqeeya si fiican. Function video dajinta ayaa waxaa ka mid ahaa in tab Download ku.
Diinta la Wondershare waa mid fudud cajiib ah. Si aad u bilaabaan, kaliya aad u leeyihiin in ay ka soo qaado file a video ka your computer. Riix oo jiidi barnaamijka, daynin u tagaan barta gaar ah. Oo markii la diyaariyo, doortaan qaab dibna loogu badalo. Qof kasta, iyadoon loo eegayn aqoon hore ama waayo-aragnimo, taas samayn karo.
Haddii aad raadinayso duwan Xilisoft Video Converter Ultimate for Windows, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate . Waa ammaan, degdeg ah, oo lagu kalsoonaan karo. Wax kasta oo aad isku dayayaan in ay la leh videos, ay u badan tahay in uu kaa caawiyo in aad qabatid shaqada fudayd iyo natiijada weyn noqon doona. Waxaad isticmaali kartaa tiro badan oo ka mid ah hawlaha ay u hubiyaan in aad videos waa kaamil ah.